China 8-16mm ceramsite yodongwe yezityalo ekwenziweni nakwifektri | Xinzheng
I-Ceramsite, njengoko igama lisitsho, ziicaramic zeceramic. Uninzi lweempawu zokubonakala kwe-ceramsite zijikeleze okanye zangqukuva, kodwa kukho ezinye zeekeramiti zamatye ezigungxulweyo ezingezizo ezirhangqi okanye ezirhangqileyo, kodwa zityunyuzwe ngendlela engaqhelekanga.
Ubume be-ceramsite buyahluka ngokuxhomekeke kwinkqubo. Umphezulu wayo liqokobhe elilukhuni, elenziwe nge-ceramic okanye i-enamel, enefuthe lokugcina amanzi kunye negesi kwaye inika amandla e-ceramsite aphezulu.
Ubungakanani be-particle ye-ceramsite ngokubanzi yi-5-20mm, kwaye ubukhulu obukhulu be-particle ngu-25mm. I-Ceramsite ihlala isetyenziselwa ukufaka endaweni yegrabile kunye namatye eekonkrithi.
Ukukhanya lelona nqaku libaluleke kakhulu kwiipropathi ezintle ze-ceramsite, kwaye ikwasona sizathu siphambili sokuba ithathe indawo yesanti enzima. Isakhiwo sangaphakathi se-ceramsite siphawulwa zii-micropores ezixineneyo zobusi. Ezi pores zivaliwe, azidibananga. Yenziwe yirhasi isongelwe kwigobolondo, sesona sizathu siphambili sobunzima bokukhanya kwe-ceramsite.
Inxalenye entle yeceramsite ibizwa ngokuba ziiceramics. Kwi-ceramsite, zininzi izinto ezintle zincinci kune-5 mm. Kwimveliso, kusetyenziswa umatshini we-sieving ukujonga la masuntswana acocekileyo, esiqhelo abizwa ngokuba yi-ceramsite. Isanti yodongwe inokuxinana okuphezulu kancinci kunye nokuchaneka kweekhemikhali kunye nokuzinza kwe-thermal. Isanti yodongwe ubukhulu becala isetyenziselwa ukubuyisela isanti yomlambo wendalo okanye isanti yentaba ukulungiselela ikhonkrithi enobunzima kunye nodaka olulula. Ingasetyenziselwa ukudityaniswa kwe-asidi kunye nekhonkrithi enganyangekiyo ngobushushu. Ezona ntlobo ziphambili sisanti yodongwe yomdongwe shale kunye nesanti yodongwe ebhabha. Injongo yokusebenzisa isanti yodongwe kukwehlisa ubunzima besakhiwo. Isanti yodongwe ingasetyenziselwa ukulima umhlaba kunye nokuhluza imveliso.
Izinto zokwakha 1.
Ikhonkrithi yeCeramsite isetyenziswe ngokubanzi kwiindidi ezahlukeneyo zezinto zangaphambili kunye neeprojekhthi zekhonkrithi ezakhiweyo kwizakhiwo zorhwebo nezoluntu (ezinje ngoxinzelelo lwangaphambi kokuxinzezeleka kunye nokungabikho koxinzelelo, izakhiwo ezithwala imithwalo okanye iindawo ezivalekileyo, ukufudumeza ubushushu okanye ukunganyamezeleki, umthwalo ongagungqiyo okanye enamandla aqulathiweyo). I-Ceramsite inokusetyenziswa kwezinye izinto zokwakha ezinje ngombhobho wokugquma, ubushushu bomzimba, ubushushu obubandayo, ukufakwa kwesandi kunye nokufakwa kwesandi; Ingasetyenziselwa izinto zokulala zomhlaba kunye nezinto zokuhluza amanzi kwezolimo nasegadini.
Ngenxa yokuba i-ceramsite inesakhiwo esikhethekileyo se-porous, light light and high surface strength, isetyenziselwa ukulungiswa komhlaba kunye nokugcinwa kwangaphakathi ukuhlangabezana neemfuno zezityalo kumxholo wamanzi, kwaye ngexesha elifanayo lihlangabezana neemfuno zokungena komoya, ngakumbi iimpawu zayo akukho luthuli kunye nobunzima bokukhanya. Iya isetyenziswa ngakumbi kulimo lwezityalo zokuhombisa zangaphakathi.
Izixhobo lokucoca ulwelo 3.Industrial
Izinto ezisebenzayo ze-ceramsite zikwasetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso. Izinto zokucoca ulwelo ze-ceramsite zinokusetyenziswa njengesixhobo sokuthwala inwebu yokucoca amanzi echibini amanzi amdaka avela kwimizi-mveliso, umthombo wamanzi ongcolileyo onamanzi ompompo, isicoci sebhayoloji esele inyangwe , i-ion exchange resin cushion, kunye ne-microorganism yokugcina okomileyo; ilungele unyango oluphambili lwamanzi okusela, inesakhono sokubhengeza izinto eziyingozi, iibhaktheriya, kunye namanzi amaminerali emzimbeni wamanzi. Isixhobo sokucoca ulwelo nesona siphumo sokusebenza kwebhayoloji esisebenzayo, kunye nesona sithuthi sihamba phambili kwi-biofilter.
Egqithileyo umoya owomileyo wodongwe wodongwe othengiswayo
Okulandelayo: Isixa esivaliweyo sePerlite yesisele sokuNqanda i-Thermal
Alumina Powder yodongwe
Yodongwe zokuvala iBhodi
ICeramic Insulation Lowes
ICeramic Microspheres ICeramic Powder yodongwe yoMhlaba weCeramic
Ipeyinti yeeCeramic Microspheres
ICeramic Oxyide Powder
Iindleko zePowder zePowder
Powder yodongwe Iyathengiswa
Yodongwe Powder Online
Umxube woMhlaba weCeramic
Yodongwe Thermal yokwambathisa
Izinto zodongwe kwiiCeramics
Iimveliso zodongwe iCeramics
Udongwe olusetyenzisiweyo kwiiCeramics
Udongwe olusetyenziswa kwiiCeramics
Hite Powder yodongwe
Microspheres yodongwe engenanto
IKaolin Clay Ceramics
Udongwe lweKaolin lweeCeramics